Nandeha nitsabo marary teny Ivandry…: Dokotera vavy iray maty voatsatok’antsy | NewsMada
Nandeha nitsabo marary teny Ivandry…: Dokotera vavy iray maty voatsatok’antsy
Tsy tana ny ain’ilay dokotera vavy izay vadin’ny Médecin Inspecteur ao Avaradrano noho ny hetraketraky ny jiolahy. Manameloka izao herisetra mianjady amin’ny mpitsabo izao ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka.
Tsatok’antsy tamin’ny vatany, io no nitarika ny fahafatesan’ilay mpitsabo iray nanao ny asany teny Ivandry, ny alatsinainy teo tokony ho tamin’ny 3 ora maraina. Araka ny loharanom-baovao, namonjy marary iray monina eny an-toerana izy ka izao niharan’ny herisetra izao. Monina eny Ivandry ihany moa ity ramatoa mpitsabo vadina dokotera ity. Araka ny vaovao voaray, nisy nanafika ilay tokantranon’ilay marary novonjeny ka izy no niharan’ny herisetran’ireo jiolahy. Hatramin’ny ora nanoratanay farany, mitohy ny famotorana mahakasika ny raharaha. Hanao fanambarana tsy ho ela momba ity vono olona feno habibiana ity ny polisim-pirenena.
Manameloka izao herisetra izao ny minisitera
Manoloana io trangana herisetra sy famonoana tamin’ny fomba feno habibiana natao tamin’ny mpitsabo io, nanao fanambarana ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka fa manameloka sy manohitra ny herisetra mianjady amin’ny mpitsabo sy ny mpiasan’ny fahasalamana. Voalaza fa miasa andro sy alina ho fanavotana ny ain’ny mpiray tanindrazana, indrindra ao anatin’izao valanaretina izao ny mpiasan’ny fahasalamana. Voakasik’izany avokoa na ireo miasa eto an-dRenivohitra na any ambanivohitra lavitra any.
Miombom-po amin’ny fianakavian’ny dokotera namoy ny ainy ny fianakaviamben’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka ary mankahery ny mpitsabo sy ny mpiasan’ny fahasalamana rehetra.
Tsy sambany fa efa matetika no iharan’ny herisetra ny mpiasan’ny fahasalamana, indrindra ireo monina any ambanivohitra ary efa nanao antso ny sendikàn’ny paramédicaux mba hijeren’ny fanjakana vahaolana hitandroana ny ain’ireo mpiasa ireo.
Notanterahina, omaly, teny Alasora Avaradrano ny fandrevenana ny nofo mangatsiakan-dratompokovavy.
Henintsoa Hani sy Vonjy A.